Arimaha Bulshada | SaaxilPress
Xaaji waddani Oo ka hadlay Ku shubo shadii Muuse Biixi
MAQAAL …….. Magaalada HARGAYSA ayaa maanta waxa ay gashay MUUDH iyo jawi ka duwan kii caadiga ahaa ee lagu qayiinay. Ka dib markii dadka Ku nool magalada gaar ahaan dadka bahwadaaga la ah cunista qaadku Ku waabaristeen qaad la’aan baahsan iyo waliba kolaydii qaadka oo afka cadceedinaya . Marka aad sii dhexgasho magaalada amaba […]
DAAWO: BARNAAMIJKA HANO-HIMILADAADA+FARSAMADA GACANTA +SOOSAARE.Khadar ismail (DHAMBAAL)
La Yaab: Nin cinwaankiisa Twitterka looga xidhay Inuu u Hanjabay Kaneeco BY.Khadar-Dhambaal
03,09,2017,Axad(S.P.COM) Nin ka mid ah dadka isticmaala barta Twitter ee dalka Japan ayaa laga mamnuucay in uu isticmaalo bartani bulshada ka dib markii uu ku hanjabay in uu dilayo kaneeco. Qofka oo waxyaabo aflagaado ah ku soo qora barta Twitter ayaa mararka qaar laga mamnuucaa isticmaalka bartaasi. Balse go’aanka xannibida cinwaanka @nemuismywife looga xannibay in […]
War DEG DEGA:DAAWO GUDOOMIYE CIRRO CAAWA GAADHAY MAGAALADA CERIGAABO IYO SIDA LOOGU SOO DHAWEYAY BY=Khadar-Dhambaal
Daawo:- Waa Qiso Cajib ah Oo Dhexe Inan Aya Abihi
Daawo Waa Qiso Cajib ah Oo Dhexe Inan Aya Abihi wana qiso aad oo laayaab badan waxa oo willki yare abihi wayeey diiyaay side baan ku garaan kara qofka ijacel Side taan waay oo dhacaday
MIYAY KU SAX SAN YIHIIN QIIMO KORDHINTA AY SAMEEYEN BASAS LA YAASHU?. QALINKII:- SUXUFI KHADAR-DHAMBAAL
Waxa maalmahan iska soo daba dhacaya xogo kusaabsan qiimo kordhinta ay ku sameeyen basaslayaashu,taas oo lagu raaci jiray basaska qiimo dhan 1500 oo Shillinka somalialnd,oo ay ka dhigeen 2000 oo shillinka somaliland. Hadaba intaynaan u gudbin jawaabta su`aasha sarre ku xusnayn aynu ka jawaabno su`aashan; Maxaa u sababa qiimo kordhinta ay sameeyen basaslayaashu amaba maxa […]
Dhibaatada facebook QALINKII: NAJAX DAAHIR AXMED
Dhibaatada facebook Dhibaatada facebook waxay marba marka kasii danbaysa kusii baahaysaa caalamka kala duwan. Aalada face book ga looyaqaano inay inagu riday fikir la`aan,waayo haduu qofku fikir leeyahay uu iska daylahaa isticmaalkisa. Dhalinyaro aad u faro badan ayaa moodaya inuu face book gu faan yahay,balse ma oga inuu wakhti lumis yahay,intay dhalinyaradu soo dhigan […]
Xaaladaha Ku Gadaaman Kaadh Qaadasha Gobolka Maroodi Jeex
Tan iyo wakhtigii somaliland la soo noqotay Xoriyada 1991-kii Waxa dalka ka jaan qaaday dawlad rasmi oo loo qaaday aftidii dastuurka Looguna Codeeyey Boqolkiiba Haa. Waxa Dalka Ka Hirgalay Hanaanka Doorashooyinka Iyadoo la qabtay Doorashadii Ugu horaysay Sanadkii 2003-dii Oo ay ku tartamayeen hanaanka xisbiyada Badan doorashadaasina waxay ahay doorashadii madaxtinimo ee dalka Oo Lagu […]
faalo ku saabsan abaaraha iyo dhibaatadeeda. QALINKII : MUUNA CABDI WARSAME
Waxa maanta ka taagan dalka abaaro aad uba`an oo saamaysay dalka jamuuriyada soomaaliland taas oo galaafatay kumanaan dad iyo duunyaba isugu jira , iyadoo ay xoolihii kamadheen dadkii dhaqanayay dadka soomaalidu waxay ubadan yihiin beeralay iyo xoolo dhaqato dadka reer guuraagaa waxay dhaqdaan xoolo iyagoo geeya kolba meeshii daaq fiican leh. hada dadkii reerkuuraaga […]